Ny lalana nodiaviko tao anatin'ny 75 taona - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Eulalia Isabelle BERATTO
Ny lalana nodiaviko tao anatin'ny 75 taona
Niara-nanome voninahitra an’Andriamanitra ho fisaorana Azy tamin’ny nitantanany nandritra izay 75 taona i Rtoa Eulalia Isabelle BERATTO. Fotoana notontosaina teny amin’ny Maison St Thérèse Carme Itaosy ny sabotsy 18 septambra ka nizarany izany niainany (Parcours de 75 ans de vie) niaraka tamin’ireo havana aman-tsakaiza ary ireo mpiara-misehatra.
Ny dingam-piainana nolalovako ka nanamarika ny maha-Lila ahy, izay azoko ho lazaina ho Fiainam-panompoana sy fanampiana ny hafa, ny mpiara-belona (service aux autres à la communauté). Nijoroako tamim-pitiavana sy fanetren-tena araka ny vavaka skoto, noraisiko ho tarigetram-piainana:
"Hanome, ka tsy hanome tapany;
Hiady, ka tsy hataho-dratra;
Hiasa, ka tsy hitandro-hasasarana;
Hahafoy tena, ka tsy hitady valisoa;
Afa-tsy ny mahafantatra
Fa manao ny sitraponao. Masina "
Teraka tamin'ny 15 septambra 1946 aho taorian'ny ady lehibe faharoa sy ny fiafiana nasetriny.
Lehibe teo anivon'ny fianakaviana roa tonta ny tenako: ny fahazazana teo amin'ny Dadako Giacomo sy ny Mamako Julienne hatramin'ny faha-12 ny taona. Ary hatramin'ny faha-28 taona dia teo amin'ny Dadatoa Odon sy Nenitoa Louise
Fomba fanabeazana roa nifameno no namolavola ny tenako:
Fiainana ny mafy sy sarotra, hentitra anaty fifehezana, fisedrana fiainana ambanivohitra any anaty ala, mpanao ala manko ny Dadanay, ary fiainana tia sy antra olona toetra nentin'i Mama teo aminay, varavarana misokatra sy fanampiana tokoa ny tranon'ny fianakaviana na dia tsy nanana aza izahay.
Fiainana fisokafana kokoa kosa, fianarana, firotsahana sy fandraisana andraikitra no nilomanosana tao amin'i Dadatoa sy Nenitoa izay samy Filoha skoto tao amin’ny Antily, ary nanana andraikitra lehibe teo amin'ny fikarakarana ny tanora sy teo amin'ny sosialy sy teo amin'ny Fiangonana ary ny Firenena.
Nianatra tao amin'ny Masera St Joseph de Cluny Andohalo hatramin'ny BEPC tamin’ny taona 1968. Avy eo niditra tao amin’ny Centre de Formation des Spécialistes de l'Information, CFSI ny Université de Madagascar, nianatra Journalisme 2 taona 1969-1970 ary nahazo diplôme de journaliste
Nanomboka niasa tao amin'ny HERIM-BAHOAKA Ampasamadinika izay nisahana ny sosialy teto amin’ny Diosezin'Antananarivo. 1971 nanomboka nitantana ny sampana Fampielezana (Information) teto amin’ny Diosezy. Izay nanamafy ny fijoro maha-lahika kristianina sy nanome fahafahana nampisokatra tamin'ny sehatra firotsahana ary fiandraiketana samihafa:
· Teo amin’ny Fiangonana, ny fiarahana teo amin’ny rafitra diosezy, ny fifaneraserana sy fiarahana tamin'ny paroasy , ny fikarakarana sy fanentanana ny tantsaha FIKETA, ny mpanakanto, ny tanora, teto amin’ny Firenena teo amin'ny fikatsahana ny Zon'olombelona, fampiofanana tao amin’ny "Hery Malagasy" , fanaovana radio CMCF momba ny ady amin’ny hanohanana, ary ny fanaovana émission 2 isan-kerinandro tao amin’ny Radio université: ho fanentanana ny tanora, fanofanana momba ny fampivoarana sy fampandrosoana, fanaovana lahatsoratra an-gazety tao amin’ny gazety Isan'andro sy Lakroa.
· Teo amin'ny ekiomenisma, nanaraka ny fampiombonana ny fiangonana kristianina teo amin'ny tanora izay niteraka ny fananganana ny FFKM
· Teo amin’ny tanora sy ny fanatanjahan-tena, nanao baskety sy Gym tamin’ny fahatanorana, avy eo niara-nitantana ny FIHEZAMA Federasiona kristianina fitaizana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahan-tena, nijoroako an-taonany maro tao amin'ny komity foibe nisahana ny fifandraisana amin'ny Iraisam-pirenena.
Ary nananako falalahana nampifameno ny fiandraiketana ny Fanilo nasionaly tamin'ny andraikitra Fampielezana teto amin’ny diosezy ka natambatra ny birao niasana izay nanamora ny asa.
Anisan'ny mpanorina ny gazetin-kevitra ADY GASY
Niatrehana ny tolona 1972 hatramin'ny 1974 ary Talen'ny gazety, nahazoako nijoro teo amin'ny tontolo fandinihina ny fiainam-bahoaka, ny lafiny politika, sy ny fiainam-pirenena ary nisedrako ny fiatrehana tribonaly tamin’ny maha-talen'gazety noho ny fitoriana momba ny hevitra politika.
Niditra Fanilo nobeazina tao amin'ny sampana maitso aho tamin’ny 1959 ary dia nifandimby nandray ambaratongan'andraikitra mpanabe: mpiandraikitra nanabe tovovavy Fanilo maitso tao Faravohitra, Filoha nampiofana sy nitantana ary nandrindra ny Diosezy Fanilo Antananarivo.
Nanomboka niandraikitra sy nitantana ny fikambanana Fanilo teo amin'ny lafiny nasionaly aho tamin’ny 1969 naha voafidy ahy ho Filoha Iombonana. Nanankinana ny tanjona hanamafy ny Fanilo, hanabe ankizy vavy malagasy Kristianina, hanofana sy hamoaka mpiandraikitra ary Filoha, hanamafy ny fototra sy fomba fanabeazana Fanilo ary ny fijoron'ny fikambanana, hanitatra ny fikambanana, izany dia natao niaraka tanaty ekipa foibe ary nahazoako falalahana nifantoka manontolo ho an'ny asa Fanilo.
27 taona no nanamafisana orina ny Fototry ny fikambanana:
Nandinihina sy namoahana fomba fanabeazana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, mifandraika amin’ny ankizy vavy, malagasy, kristianina, katolika ary mifantoka amin'ny Foto-panabeazana skoto napetrak'i Baden Powel.
Nanofana sy nampitomboana ny mpitondra hampita fanabeazana.
Nananganana sampam-panabeazana mifanaraka amin'ny taona sy ny seha-piainana: tantsaha, sembana. Namoahana boky Fototra mirakitra ny hitondrana ny Fanabeazana Fanilo.
Nandalinana niaraka tamin’ny RAPI ny fanabeazana ara-panahy Fanilo noraiketina anaty boky ny RAP-ZAP
Namoronana sy nitarihana lahasa nasionaly ara-tsikotisma nentina nanabe
Nanokafana miandalana ny Fanilo amin’ny lafiny fampivoarana iombonana ka nitadiavana toerana any ambanivohitra hanaovana izany ka nahazoana sy nananganana ny toby SAHAFANILO ao Sadabe tamin’ny 1979 ho toeram-panabeazana sy fampivoarana ary fampandrosoana.
Nirotsahana sy nandraisana andraikitra teo amin’ny sehatry ny tanora: 12 taona tamin'ny fanamafisana ny rafitra sy fitantanana ny Vovonam-Pirenena Katolikan'ny Tanora VPKT. Nandritra ny 6 taona teo amin’ny fandrindrana ny Filankevitry ny Tanora Malagasy FIFITAMA nivondronan'ny fikambanana tanora lahika sy kristianina. 5 taona mpitondra tenin'ny tanora malagasy teo amin'ny fifandraisana amin'ny Minisiteran'ny tanora.
Nirotsahana sy nandraisana andraikitra teo amin'ny Skotisma malagasy: 13 taona nitantanana sy nampivondronana ny Firaisain'ny Skotisma eto Madagasikara FSM izay manambatra fikambanana skotisma 5 tonta.
12 taona tao amin'ny biraon'ny SKotisma Zazavavy eto Madagasikara SZM. Nandraisana andraikitra teo amin'ny sehatry ny Fiangonana nasionaly : Isan'ny lahika nifanakalo sy niara- nidinika teo amin'ny SECO, fanomanana sy fandraisan anjara tamin’ny sinaoda nasionaly 1975.
Nitantana ny Komity mpanomana ary niara-nitantana ny Symposium tanora katolika 1985.
Andraikitra teo amin'ny Iraisam-pirenena:
9 taona tao amin'ny Secrétariat Mondial CICG mandinika ny fanabeazana ara-skotisma amin'ny fivelomana ny finoana maha-katolika ary niandraikitra ny faritra Afrika CICG;
3 taona mpikambana mpisolo-toerana tao amin'ny Comité Afrique, AMGE.
Nitondra ny tenin'ny vehivavy Afrikanina momba "ny vehivavy sy ny fampandrosoana" niaraka teo amin’ny CCFD- 1992.
Nandray anjara tamin'ny Fiofanana teo amin'ny iraisam-pirenena, Suisse, Mexique, Angleterre, tamin'ny fiatrehana Conférence Mondiale AMGE natao tany France, New York, Kenya, Singapore tamin'ny fihaonamben'ny CICG, natao tany amin'ny Firenena : Afrique 13, Europe 10, Amérique 2, Asie 1
Nikarakara ny fandraisana ny Fihaonambe CICG teto Madagasikara (1980) namory Firenena 30.
Namarana ny fisahanina fanabeazana ny tenako ka nampita ny fiandraiketana ny fanabeazana sy fitantanana ny Fanilo tamin'ny Filoha Iombonana tanora izay efa nomanina sy nosedraina ny taona 1996, ary dia naka soridalam-piainana vaovao indray hifantoka akaiky kokoa amin'ny Fampivoarana iombonana hitodika amin'ny tantsaha,
Ø 1996-1998 - ka dia nianatra 2 taona tany amin’ny Collège Coopératif de Paris -université de Rouen momba ny "Développement local " mba ho "Entrepreneur d'Initiative Locale et Animateur de Projet" ary dia niara-nanangana tetikasa tamin'ny CCFD natao ho fianarana momba " ny fandraisana anjara amin'ny fampivoarana ny faritra Sadabe miainga ao amin'ny toby fanofanana Sahafanilo nohamafisina " izay narahina famatsiam-bola avy hatrany ny fampiharana.
Nody an-tanindrazana tamin’ny 1998 dia nandray an-tanana ny fitantanana ny toby Sahafanilo ary ny fiandraiketana ny sampana Fampivoarana tao amin’ny Fanilo. Tao anatin'ny 7 taona (1998-2005) dia:
Nitantana ny fanatanterahana ny tetikasa fampivoarana ny tantsaha tao amin'ny commune Sadabe miainga amin'ny toby Sahafanilo, novatsian'ny CCFD.
Nanamafy orina ny fotodrafitrasa tao Sahafanilo hanamora ny asa sy ny fanatrarana ny tanjona: nanorina trano 6, nanangana fotodrafitrasa famokarana zana-trondro, fiompiana sy fanodinana tantely, fanamboarana sy fanamafisana barazy, famatsiana fitaovana, fambolena, fiompiana , fambolena hazo.
Niara-niasa tamin'ny tantsaha manodidina: nanentana, nampiofana, nanampy tosika, nanangana fikambanan'ny tantsaha 18 fokontany, nanokatra fiaraha-miasa handrosoana amin’ny sehatra mikarakara tantsaha, nampifandray ary nijoro tamin’ny tontolo fampandrosoana eto amin’ny amin’ny Firenena.
Nanangana fikambanana VASI-VAHASA- V.V- Malagasy/Vazaha 1999 (Vivre Autrement la Solidarité Internationale - Volonté d'Aménager Harmonieusement Sahafanilo), mijoro hanampy sy hanome tanana amin’ny fanatrarana ny Tanjona ijoroan'ny Sahafanilo sy mitodika amin'ny fampandrosoana ny tantsaha ao Sadabe. V.V izay nanampy tamin'ny fananganana fotodrafitrasa sy fanorenana ary mbola manohy hatramin'izao ka mbola hijoroako hanampiana ny Fanilo, izany hoe mbola maha-Fanilo ampahany ahy,
Na teo aza ny alahelo satria nisaorana ary nalefa nisotro ronono tamin’ny 2005 dia tsy kivy fa mbola nanana hery sy traikefa hahazoana mikatroka sy hizara izay harena azo an-taonany maro, dia izay no nidirana tamin'ny dingam-piainana manaraka, hanohizana ny velirano Fanilo natao hanampy ny mpiara-belona, dia nanangana ny fikambanana ODADI tamin’ny 2005 hanohizana ny fampivoarana. Niaraka tamin'ireo Mpikatroka sy Teknisianina mitovy tarigetra ary vonona ny hanatsara ny tontolo ambanivohitra.
ODADI (Organisation d'Appui au Développement Intégré) dia fanohizana ny fampivoarana ny tantsaha fa ao amin'ny Commune Ankazondandy sy Mangamila. Ny tanjona dia ny hampandrosoana sy hanatsarana ny fari-piainana izay efa natao an-taonany maro ka nananana traikefa nanamora ny asa. Miainga avy ao amin'ny toby PATRAKALA naorina ao Beorana, natao ho toeram-panofanana sy fandraisana, famokarana, fiarovana ny tontolo iainana, fanentanana ny tantsaha, fanodinana menaka manitra, fikarakarana ny vehivavy sy ny ankizy, fiaraha-miasa amin'ny sekoly, ary fanohanana ny tantsaha. Miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka samihafa izay matoky ny fijoro ODADI ka manamora ny asany, mamatsy sy manome tanana.
Ireo no dingam-piainana nodiaviko tao anatin'ny 75 taona- Raha tsinjaraina dia:
24 taona: no nanamafisako ny tenako, nibeazako tena, nianarako, nikoloako tena (1946 - 1970)
28 taona : no nijoroako teo tamin’ny Fiangonana sy ny tanora Malagasy, nanabeazana ,nandinihina, nanorenana, nijoroana, niandraiketana, nisolotena, nitondrana teny ary nijoroana ho an'ny tanora zazavavy (1968- 1996)
23 taona: no nandraisako andraikitra teo amin’ny fampivoarana ny Firenena: Nampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy nampivoarana ny tantsaha (1998-2021) izay mbola tohiziko ankehitriny.
Ireo sehatra nijoroako indray mijery :
53 taona nanompoana ny Firenena sy ny malagasy ny tenako, nanao izay vitako aho indrindra ho an'ny tovovavy sy ny vehivavy, inoako fa izay no nahatonga ny fanasana ahy ho Minisitry ny vehivavy tamin'ny andron'ny Filoha Ratsiraka.
62 taona no niainako ny maha-Fanilo
Dingana nolalovako sy ny andraikitra notanako tamin'izany :
Nobeazina : Fanilo sampana maitso tao Faravohitra
Cheftaine : nanabe tovovavy Fanilo maitso - tao Faravohitra
Filoha : nandrindra sy nikarakara ny Fanilo Diosezy Antananarivo
Filoha Iombonana tao amin'ny foibe Fanilo : nanabe, nanofana, nikaroka, nanorina, nandrindra, nitantana, nanangana, nanitatra, namatsy, nampifandray,
Nitantana ny toby Sahafanilo, nisokatra amin’ny fampivoarana: nanorina, nanangana fotodrafitrasa, nitady famatsiana, namatsy fitaovana, nanokatra fiaraha-miasa, nampifandray, nisokatra amin'ny tantsaha,
Manohy nanohana ny toby Sahafanilo avy amin'ny Vasi-Vahasa - fikambanana mpiara-miasa sy mpanohana - (hatramin'izao)
T O N T A L Y
Be ny efa vita teo amin’ny fampivoarana ny any ambanivohitra. 16 taona aty aoriana niaraka amin’ny ODADI, dia mbola mijoro sy afaka mikatroka aho, izay hiderako sy hisaorako an'Andriamanitra lehibe nitantana sy nitsimbina ahy, natoky sy niankina taminy lalandava aho, satria ho ahy "ataovy izay vitanao, fa Andriamanitra mameno ny sisa"
Ho ahy, hatao tsara amim-pitiavana sy amim-pahamarinana ny atao dia miteraka fahatokisan'ny hafa sy fanampiana amim-pahatsorana sady manokatra lalana ary famatsiam-bola maharitra.
Ny manetsika ny hataoko dia tsy manala izay efa an'i Paoly homena an'i Piera fa mitady kosa izay ho an'i Piera , dia mifameno ireo ary mampitombo izay efa hananana ka dia lasa harena fa tsy mifambotry.
Ny heriko dia ny fanekeko fa raha misy hatao dia tsy izaho Lila no manao na miteny fa ankiniko amin'Andriamanitra ilay miantso sy maniraka ahy, ary ny fahatsapako ihany koa fa izay hataoko dia tsy ho ahy fa misy ireo ao andamosiko miandrandra vokatra ka manome ahy fahasahiana sy hery handresy.
Orange et éducation : 30 nouvelles Ecoles Numériques pour l’année scolaire 2021-2022 - il y a 9 jours